"Ngo izinhlanzi noboya": phraseologism ukubaluleka nomlando ivela khona
NgesiRashiya, eziningi imishwana ezithakazelisayo isethi, okushiwo ngalo akulula ukuqonda abantu bakwamanye amazwe. Kodwa ngezinye izikhathi ngisho owazalwa abantu Russian abakwazi kahle ukuchaza lokhu noma lokhuya imizwa kanye ilungelo ukuyisebenzisa. Ngokwesibonelo, incazelo ukuthi uma wonke umuntu oye wezwa kuBaba futhi "inhlanzi noboya" incazelo phraseological futhi umlando lapho ivela khona, sizozama ukwenza kulesi sihloko.
Ngo izinhlanzi isiRashiya noboya?
Kusukela ekuqaleni kuka ebuntwaneni sifundiswa ukuthi khona ngoboya bemvu obumnyama ezithambile obukhulu - ke ingenye kuyizimpawu ezincelisayo. Khona-ke kungani sithi, "Ngo izinhlanzi noboya"? Okusho phraseologism kulula ukuchaza - kuba izinga ompofu kakhulu ikhava ukwahlukanisa, noma ukungezwakali kwawo. Ngo inhlanzi, noboya akuyona? Ngakho sidla inkulumo edumile lapho sifuna ukugcizelela ikhwalithi embi ezinye kuncike (ngokuvamile izingubo), kanye nokungakwazi yakhe ukuze ifudumale.
Isisho "inhlanzi noboya" uvela isaga esidala Russian. In the okufushane umnyuziki ngakho ufunde kanje: ". Elingenamikhono Ompofu sika inhlanzi noboya" Ngasekuqaleni isisho efanayo yayisetshenziswa ngenkuthalo: "Ngo-noboya sterlet." Kwakuwusuku abampofu abangeke bakwazi izingubo ngokwanele efudumele ebusika Russian. Ngokusho kwezazi ezithile, lesi saga kwadingeka anencazelo ejulile, isibonelo, sikhunjuzwe ukuthi ukwazi isimo umuntu futhi isimo sakhe sezimali kungaba ngokucophelela ukwenza ngaphandle isudi yakhe. Nokho, namuhla, lesi saga cishe ngokuphelele ukusetshenziswa, futhi ungezwa ngokuvamile kakhulu.
"Ngo izinhlanzi noboya": Inani phraseologism kanye nokusebenzisa kwayo lesifanele
Ukusebenzisa inkulumo yakhe amazwi, ungakwazi kudlule i bafundile, kahle ukufunda futhi behlakaniphile. Lapho-ke kufanelekile ukuthi "inhlanzi noboya?" Okusho phraseologism kuhilela ukuyisebenzisa ukuhlola ikhwalithi izingubo. Enkulumweni yansuku zonke, ungakwazi ukuyisebenzisa lapho ucabanga ukuthi izinga abampofu into noma igqoke kubanda kakhulu. Isibonelo esihle: "Ngingumfana abandayo ngakho namuhla, lokhu ngingenandawo ibhantshi ku izinhlanzi noboya" noma "Futhi yeka indlela ubeka into ku frost emgwaqweni, futhi inhlanzi noboya amajazi." Zombili lezi ziphakamiso zilungile futhi kuyoba efanele ezimweni ezifanele. Nokho, kufanele uqaphele lapho ukuzisebenzisa ukugxeka izingubo yomunye, ungakwazi ubuhlungu umnini wayo. Futhi ekugcineni, masikhumbule ethandwa umfundi ngoma: "platishko yami inhlanzi noboya, amagilavu yami ku inyoka izimpaphe ...".
Ukuhlonipha - kubalulekile kuwo wonke umuntu!
Ngingaba ukuthumela mina yidla uju: ezahlukene imicabango yabantu, amasiko kanye zokupheka.
Buso Japanese lamademoni: ukubaluleka, izici, ukubukwa amaqiniso athakazelisayo
Meaning of igama elithi "umbhoshongo" - High Chamber
IMisa, abantu namasiko elite. ubufakazi
Indlela yokudlulisela imali ku-Yandex-isikhwama - incazelo eningiliziwe
Pheka izinhlanzi ngezandla zakho: lula ukudoba
Isikhathi umehluko nge Cyprus. Moscow - Cyprus: isikhathi umehluko
Yehlisa izinzwane. Siyini isizathu?
Imayonnaise Vega. imayonnaise Lenten ekhaya: zokupheka
Ibhansi Russian begijima ngokushesha kunokuba umoya! Amazinga kanye nezici inja kubanga Borzoi Russian
Ikhambi for dandruff
Izinhlobo inkumbulo. Main inkumbulo umsebenzi
Lamalungelo nenkululeko yomuntu isakhamuzi